Outlook password Kudzoreredza Turu. PST Pasiwedhi Kudzoreredza Software.
DataNumen Outlook Password Recovery chishandiso chine simba chekutora password kubva kune yakavharidzirwa Outlook PST mafaera. Kana iwe ukakanganwa password yeiyo yakavharidzirwa PST faira, saka nechokushandisa ichi, unogona nyore kupora pasiwedhi uye kuwana zvirimo mune iyo PST faira.
4.90 / 5 (kubva 1,637 mavhoti)
Sei DataNumen Outlook Password Recovery?
Ini ndanga ndichishandisa Outlook 2010 pane yangu yekupedzisira
Ndapedza maawa mashanu nhasi ndichitsvaga webhusaiti iyo inopa yemahara kana isingadhuri Outlook password Kudzoreredza. Ndakazowana DataNumen izvo zvakakwana
Tichaisa bookmark pawebhusaiti yako kana toda kutenga chero
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Outlook Password Recovery v1.2
Tsigira Microsoft Outlook 97 kusvika 2019 uye Outlook yeHofisi 365 yakavharidzirwa mafaira ePST.
Tsigiro yekudzosera mapassword ebatch yemafaira ePST akavharidzirwa.
Yakabatanidzwa neWindows shell, kuti iwe ugone kudzorera password yeiyo yakavharidzirwa PST faira ine mamiriro (kurudyi tinya) menyu yeWindows Explorer zviri nyore.
kushandisa DataNumen Outlook Password Recovery Kudzoreredza Mapassword kubva Akanyorwa Akavanzika PST Mafaira
Kana yako PST faira yakavharidzirwa uye ukakanganwa password yayo, unogona kushandisa DataNumen Outlook Password Recovery kuverenga iyo PST faira uye kudzoreredza password.
Cherechedza: Usati wadzorera password kubva yakavharidzirwa Outlook PST faira ine DataNumen Outlook Password Recovery, ndapota vhara chero mamwe mashandiro anogona kugadzirisa iyo PST faira.
Sarudza iyo yakavharidzirwa Outlook PST faira rine password kuti idzoserwe:
bhatani kuti uwane iyo yakavharidzirwa PST faira pakombuta yemuno.
bhatani, uye DataNumen Outlook Password Recovery kuda start kuongorora uye kudzoreredza password yeiyo yakavharidzirwa PST faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekudzoreredza maitiro, kana password iri yakavharidzirwa PST faira inogona kudzoreredzwa zvinobudirira, iwe uchaona meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kudzvanya iyo
bhatani kukopa password ku clipboard, wozoishandisa kuvhura uye kuwana iyo yakavharidzirwa PST faira muAptlook.
Cherechedza: Pasiwedhi inogona kunge isina kufanana neyawakamboshandisa, asi inogona kuvhura iyo yakavharidzirwa PST faira pasina matambudziko.
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 inoburitswa munaNovember 9th, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.1 inosunungurwa munaJune 17, 2020
DataNumen Outlook Password Recovery 1.0 inoburitswa muna Gumiguru 20, 2014
Tsigira Microsoft Outlook 97 kusvika 2016 yakavharidzirwa mafaira ePST.